Nyika dzemuSADC dziri kukuurudzirwa kuti dzibatsire vabvakure vari munyika dzavagere padambudziko reCOVID-19.
Nhengo dzesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC dzakurudzirwa kuti dzisabate vanhu vanobva kune dzimwe nyika asi vachigara munyika dzavo nekunze kwemaoko nokuti kushandidzana ndiyo nzira chete ingabatsira mukupedza denda reCOVID-19.
Kurudziro iyi yakaitwa nemunyori mukuru weSADC, Amai Stergomena Lawrence-Tax nemusi weChina manheru vachiturira vatori venhau mamiriro kana kuti progress report, yeCOVID-19 mudunhu iri.
Panguva ino yechirwere chashura mare pasi rose, Amai Lawrence-Tax vakakumbira nhengo dzeSADC kuti dzisaite rusarura mukubatsira mune zvehutano vanhu vanobva kune dzimwe nyika vagere munyika dzisi dzavo.
Amai Lawrence-Tax vakati kuzeyewa kwenyaya maererano nezvikwanisiro zvinodiwa mukurwisana neCOVID-19 uye kutsvagurudza nzira dzekupedza denda iri kwakafanira kuitwa pamisangano yegungano iri kuitira kuti kutorwe zvisungo zvinoenderana nekuchengetedzwa kwehutano hwevanhu.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rezvehutano muBotswana, Amai Doreen Motshegwa vaudza Studio7 parunhare kuti nyika iyi yagara isina rusarura kunyange hazvo COVID-19 yaunza shanduko mumarapirwo evanhu.
Kurudziro yakaitwa nemunyori mukuru weSADC pamwe chete nekuzvipira kwaitwa neBotswana mukubatsira vanobva kune dzimwe nyika mune zvehutano zvafadza zviuru nezviuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi.
Chizvarwa cheZimbabwe chafarira kurudziro iyi uye chitsidzo chaitwa neBotswana ndiVaMoses Sorojena avo vanoti vakanga vogara vakabatira hura mumaoko vachityira kuti nyika iyi ichamisa kubatsira vanhu vanobva kune dzimwe nyika vageremo.
Vachitsigirana naVaSorojena, Muzvare Sylvia Titus vanoti SADC yatora danho rakanakira zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvakazara munyika dzakawanda mudunhu iri kutsvaga chouviri.
Munyika dziri muSADC, South Africa ndiyo ine vanhu vakawanda vakabatwa pamwe nekuurayiwa neCOVID-19.